Ukuphathwa okujwayelekile - iSuzhou Bricmaker Automation Co., Ltd.
Amakhasimende awadingi kuphela ukukhetha umhlinzeki ngemishini ethembekile, ubuchwepheshe obuqinile, insizakalo ephelele yokuthengisa ngemuva kanye nokuhwebelana okujwayelekile kwezinsizakalo zobuchwepheshe. Okubaluleke kakhulu, abaphathi babo kufanele babekhona ukuqinisa ukuqwashisa ngabaphathi, ukuzethemba.
Ukuqinisa ukuphathwa kwemishini ukuqinisekisa ukusebenza okujwayelekile kwemishini, ukuthuthukisa ukusetshenziswa kwemishini nokuphelela, lokhu kuzothuthukisa ngqo izinkomba zobuchwepheshe nezomnotho zamabhizinisi, kukhulise ukusebenza kahle kwezomnotho kwamabhizinisi.
Qinisa izindleko zokuphathwa kwedatha, izinto zokusetshenziswa, ukusetshenziswa kwamandla, amaholo, imishini, izintela nenye idatha yokubalwa kwezindleko, ukulawula, ukuphathwa.
Ngokuya ngokusetshenziswa kokucaciswa namabhukwana wokusebenza, ukusetshenziswa okunengqondo kwemishini, yenqabela ukulayisha ngokweqile usebenzisa.
2.Thatha ukubaluleka okukhulu ekuqeqeshweni kwangaphambi komsebenzi, ukushintshana nabaphakeli, kusukela ekungazini nasekuqondeni futhi wenze umsebenzi omuhle wokugcinwa kwemishini nsuku zonke.
3.Ukwenza izinga lohlelo lwamabhizinisi, lawula ukusebenza kwabasebenzi, qiniseka ukuthi kuqhubeka ukusebenza okujwayelekile komkhiqizo nokusebenza.
4.Sula ohambweni lwezinkampani, uhlele umbono wezinkampani, usungule amasiko ezinkampani, uthuthukise amasu ezinkampani.
Ukuphathwa kokuwina inzuzo
Inhloso yokuphatha: Inkampani iphishekela isikhathi eside nesinamandla sokuphila, esikhundleni sokuthi inkulu kangakanani. Ngokuqinisekile yenza inkampani iqhubeke ngokuthuthuka.
Inhloso yenkampani: I-Bricmaker ikunikeza izinsiza kusebenza ezisezingeni eliphakeme nesisombululo sobuchwepheshe, ukukusiza ukuthi uthole izinzuzo ezinkulu kwezomnotho futhi ubone inani lakho lempilo!